No one killed Jessica (2011) | MM Movie Store
MM Movie Store
The Best Movie Website
Biography Crime Drama
ဒီဇာတျကားလေးကတော့တရားမြှတမှုနဲ့သွဇာအာဏာတို့လှနျဆှဲမှုတို့ကိုထငျးလငျးအောငျ ဖျောပွထားပွီးအမှနျတရားရဲ့နိမိတျပုံကိုလညျးမီးမောငျးထိုးပွပေးနတေဲ့ဇာတျကားကောငျးလေးတဈခုပဲဖွဈပါတယျ။ဤ ဇာတျကားရဲ့အဖှငျ့မှာတော့Night Club တဈခုမှာ လူသတျမှုဖွဈပှားပုံနဲ့အစပြိုးထားခဲ့ပါတယျ။
အသတျခံရသူမှာ တကျသဈစမျောဒယျလျ ဂကျြဆီကာ ဖွဈပွီး သူမ အားသနေတျဖွငျ့ပဈသတျခဲ့သူကတော့ မနဈရျှဘာဝဂျြ ပဲဖွဈပါတယျ။ဖွဈပှားပုံကတော့ မနဈရျှ အရကျတောငျးဝယျရငျးဂကျြဆီကာ နဲ့အခငျြးမြားရာမှစခဲ့တာပါ။
ဘားပိတျခြိနျဖွဈ၍ အရကျမရောငျးတော့ကွောငျးဂကျြဆီကာ ရှငျးပွသျောလညျး အရကျမူးလှနျသူမနဈရျှ အတှကျတော့ နားမဝငျခဲ့ဘဲ လူသတျမှုကြူးလှနျခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီနောကျ ဂကျြဆီကာရဲ့အဈမ ဆကျဘရီနားကမနဈရျှကို စှဲခကျြတငျပွီးအမှနျတရားပျေါပေါကျစရေနျကွိုးပမျးခဲ့ပါတယျ။
သို့သျော မနဈရျှ ဟာ ဝနျကွီးတဈဦးရဲ့သားဖွဈတာကွောငျ့ဆကျဘရီနားအတှကျ မလှယျကူခဲ့ပါဘူး။ဒီလူသတျမှုမှာမကျြမွငျသကျသေ ၃၀၀ ကြျောရှိခဲ့သျောလညျးဝနျကွီးရဲ့သွဇာအာဏာကွောငျ့ အားလုံးဟာအမှနျတရားကိုပုနျးလြှိုး လဈြလြူရှုလိုကျကွပါတယျ။
ဒါဟာညီမလေးတဈယောကျအတှကျ အမှနျတရားပျေါပေါကျစလေိုသူ ဆကျဘရီနားအတှကျ ကွကှေဲမှုတှေ ဖွဈထှနျးစခေဲ့ပါတယျ။တရားရုံး ကွားနားခြိနျတှမှောလညျးဆုံးဖွတျမှုတှအေောကျမှာ လာဘျစားမှုတှအေောကျမှာအာဏာမရှိသူ ပွညျသူသာ ကရြှုံးခဲ့ရပါတယျ။
အဓိက မကျြမွငျသကျသကေလညျးငှနေဲ့ အဝယျခံရပွီး အမှုကိုအဆုံးသတျထှကျဆိုပေးခဲ့ပါတယျ။ဆကျဘရီနားအတှကျတော့ညီမလေးရဲ့အမှနျတရားမပျေါပေါကျခဲ့သလိုမိဘတှစေိတျဆငျးရဲ ဒုက်ခကိုကွညျ့ရငျးစိတျဓာတျကသြူလုံးလုံးဖွဈလာခဲ့ရှာသညျ။
ဒီအမှုစဈဆေးမှုဟာ ခွောကျနှဈတာကွာမွငျ့ခဲ့ပွီးဂကျြဆီကာအတှကျလညျးတရားမြှတမှုမရှိဘဲ ပိတျသိမျးခဲ့ရပါတယျ။ဒီလိုမြိုးအခြိနျမှာတော့NDTV သတငျးဌာနရဲ့သတငျးထောကျမလေးမီရာက တရားမြှတမှုကိုပွနျလညျဖျောထုတျခဲ့သောအခါ၌——–။ကဲ ဘာတှဆေကျဖွဈလာမှာလဲ။
အဈမတဈယောကျအဖို့ လကျလှတျခဲ့ရသောအမှုအား မီရာက ဘယျလိုကွိုးပမျးဆောငျရှကျမှာလဲ။အောငျမွငျမညျလား၊ကရြှုံးမညျလား။ဒီဇာတျကားလေးမှာတော့လူသတျသမားအား ဖျောပွပေးခဲ့ပွီးသွဇာအာဏာရဲ့လှမျးခွုံမှုတှကေပွညျသူ့ဥပဒအေပျေါ ရကျစကျသလားဆိုတဲ့မေးခှနျးမြိုးမေးရတဲ့အထိ ကနျြရဈစသေညျ့ဇာတျကားကောငျးလညျးဖွဈပါတယျ။
ထို့အပွငျ ရိုးရိုးရှငျးရှငျးနဲ့ ပေးပို့စခေငျြသညျ့အသိပညာအားလညျး တိုကျရိုကျပေးစှမျးနိုငျခဲ့သညျ။မီဒီယာသမား မီရာ ဆိုတဲ့သတငျးထောကျမလေးအတှကျအမှနျတရားရဲ့ထိုးနှကျမှုတှေ၊ကွိုးပမျးမှုတှေ စှမျးဆောငျမှုတှေ၊ဆကျဘရီနားရဲ့ ညီအဈမမတ်ေတာတှေ၊နိုငျငံရေးသွဇာအာဏာရှငျတှနေဲ့ပွညျသူ့ဥပဒေ လှနျဆှဲခဲ့မှုတှေ စတဲ့အခကျြတှကေလညျးလူ့သဘောသဘာဝကို ကှကျကှကျကှငျးကှငျးမွငျတတျစခေဲ့သညျ။
ဒါ့ကွောငျ့ဒီဇာတျကားလေးမှာတော့အမှနျတရားအနိုငျရခဲ့မညျလော၊ သို့မဟုတျဥပဒအေထကျ ဝနျကွီးတှပေဲရှိခဲ့မညျလော ဆိုတာတော့ဒီဇာတျကားလေးကွညျ့ရငျးခနျ့မှနျးညှနျးဆိုကွညျ့ရအောငျလား မိတျဆှေ။
ဒီဇာတ်ကားလေးကတော့တရားမျှတမှုနဲ့သြဇာအာဏာတို့လွန်ဆွဲမှုတို့ကိုထင်းလင်းအောင် ဖော်ပြထားပြီးအမှန်တရားရဲ့နိမိတ်ပုံကိုလည်းမီးမောင်းထိုးပြပေးနေတဲ့ဇာတ်ကားကောင်းလေးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဤ ဇာတ်ကားရဲ့အဖွင့်မှာတော့Night Club တစ်ခုမှာ လူသတ်မှုဖြစ်ပွားပုံနဲ့အစပျိုးထားခဲ့ပါတယ်။
အသတ်ခံရသူမှာ တက်သစ်စမော်ဒယ်လ် ဂျက်ဆီကာ ဖြစ်ပြီး သူမ အားသေနတ်ဖြင့်ပစ်သတ်ခဲ့သူကတော့ မနစ်ရ်ှဘာဝဂ်ျ ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဖြစ်ပွားပုံကတော့ မနစ်ရ်ှ အရက်တောင်းဝယ်ရင်းဂျက်ဆီကာ နဲ့အချင်းများရာမှစခဲ့တာပါ။
ဘားပိတ်ချိန်ဖြစ်၍ အရက်မရောင်းတော့ကြောင်းဂျက်ဆီကာ ရှင်းပြသော်လည်း အရက်မူးလွန်သူမနစ်ရှ် အတွက်တော့ နားမဝင်ခဲ့ဘဲ လူသတ်မှုကျူးလွန်ခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီနောက် ဂျက်ဆီကာရဲ့အစ်မ ဆက်ဘရီနားကမနစ်ရ်ှကို စွဲချက်တင်ပြီးအမှန်တရားပေါ်ပေါက်စေရန်ကြိုးပမ်းခဲ့ပါတယ်။
သို့သော် မနစ်ရှ် ဟာ ဝန်ကြီးတစ်ဦးရဲ့သားဖြစ်တာကြောင့်ဆက်ဘရီနားအတွက် မလွယ်ကူခဲ့ပါဘူး။ဒီလူသတ်မှုမှာမျက်မြင်သက်သေ ၃၀၀ ကျော်ရှိခဲ့သော်လည်းဝန်ကြီးရဲ့သြဇာအာဏာကြောင့် အားလုံးဟာအမှန်တရားကိုပုန်းလျှိုး လျစ်လျူရှုလိုက်ကြပါတယ်။
ဒါဟာညီမလေးတစ်ယောက်အတွက် အမှန်တရားပေါ်ပေါက်စေလိုသူ ဆက်ဘရီနားအတွက် ကြေကွဲမှုတွေ ဖြစ်ထွန်းစေခဲ့ပါတယ်။တရားရုံး ကြားနားချိန်တွေမှာလည်းဆုံးဖြတ်မှုတွေအောက်မှာ လာဘ်စားမှုတွေအောက်မှာအာဏာမရှိသူ ပြည်သူသာ ကျရှုံးခဲ့ရပါတယ်။
အဓိက မျက်မြင်သက်သေကလည်းငွေနဲ့ အဝယ်ခံရပြီး အမှုကိုအဆုံးသတ်ထွက်ဆိုပေးခဲ့ပါတယ်။ဆက်ဘရီနားအတွက်တော့ညီမလေးရဲ့အမှန်တရားမပေါ်ပေါက်ခဲ့သလိုမိဘတွေစိတ်ဆင်းရဲ ဒုက္ခကိုကြည့်ရင်းစိတ်ဓာတ်ကျသူလုံးလုံးဖြစ်လာခဲ့ရှာသည်။
ဒီအမှုစစ်ဆေးမှုဟာ ခြောက်နှစ်တာကြာမြင့်ခဲ့ပြီးဂျက်ဆီကာအတွက်လည်းတရားမျှတမှုမရှိဘဲ ပိတ်သိမ်းခဲ့ရပါတယ်။ဒီလိုမျိုးအချိန်မှာတော့NDTV သတင်းဌာနရဲ့သတင်းထောက်မလေးမီရာက တရားမျှတမှုကိုပြန်လည်ဖော်ထုတ်ခဲ့သောအခါ၌——–။ကဲ ဘာတွေဆက်ဖြစ်လာမှာလဲ။
အစ်မတစ်ယောက်အဖို့ လက်လွှတ်ခဲ့ရသောအမှုအား မီရာက ဘယ်လိုကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်မှာလဲ။အောင်မြင်မည်လား၊ကျရှုံးမည်လား။ဒီဇာတ်ကားလေးမှာတော့လူသတ်သမားအား ဖော်ပြပေးခဲ့ပြီးသြဇာအာဏာရဲ့လွှမ်းခြုံမှုတွေကပြည်သူ့ဥပဒေအပေါ် ရက်စက်သလားဆိုတဲ့မေးခွန်းမျိုးမေးရတဲ့အထိ ကျန်ရစ်စေသည့်ဇာတ်ကားကောင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။
ထို့အပြင် ရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့ ပေးပို့စေချင်သည့်အသိပညာအားလည်း တိုက်ရိုက်ပေးစွမ်းနိုင်ခဲ့သည်။မီဒီယာသမား မီရာ ဆိုတဲ့သတင်းထောက်မလေးအတွက်အမှန်တရားရဲ့ထိုးနှက်မှုတွေ၊ကြိုးပမ်းမှုတွေ စွမ်းဆောင်မှုတွေ၊ဆက်ဘရီနားရဲ့ ညီအစ်မမေတ္တာတွေ၊နိုင်ငံရေးသြဇာအာဏာရှင်တွေနဲ့ပြည်သူ့ဥပဒေ လွန်ဆွဲခဲ့မှုတွေ စတဲ့အချက်တွေကလည်းလူ့သဘောသဘာဝကို ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းမြင်တတ်စေခဲ့သည်။
ဒါ့ကြောင့်ဒီဇာတ်ကားလေးမှာတော့အမှန်တရားအနိုင်ရခဲ့မည်လော၊ သို့မဟုတ်ဥပဒေအထက် ဝန်ကြီးတွေပဲရှိခဲ့မည်လော ဆိုတာတော့ဒီဇာတ်ကားလေးကြည့်ရင်းခန့်မှန်းညွှန်းဆိုကြည့်ရအောင်လား မိတ်ဆွေ။
(Megaup.net) Large Size ~ Download
(Users Drive) Large Size ~ Download
(Up Stream) Large Size ~ Download
(Yoteshin) Large Size ~ Download
Almost Human (2020)
Castaway on the Moon (2009)
R.I.A.(2021) / Override
A Million Little Pieces (2019)
Memoir ofaMurderer ( 2017 )
Mr. Robot (Season 2) အပိုငျး (၄)
The Great Hypnotist (2014)
MM Movie Store © 2020 All rights reserved.
Login to MM Movie Store